Mofo Anana Malagasy - Recette de cuisine Malagasy
par Gaël RAKOTOVAO	 22 juin 2016
Ity recette ity dia atao hoe mofo anana anefa tsy misy anana akory. Afaka atao ao anaty mofo-dipaina dia atao gouter hoan’ny ankizy.
Fikarakarana mofo anana
Kapohana ny 3oeufs sy sel sy poivre. Rehefa be atody izy dia tsy mifoka menaka be.
Arotsaka ny 350g de farine sy 50cl d’eau. Izany hoe tsy atao madity be.
Arotsaka ny tomates sy oignons misimisy voatetika madinika sy coriandre ary ciboulette. Avela hilona 15mn dia endasina. Tsy mila menaka betsaka.
Ampiarahana amin’ny citron sy carottes pimentées.
Azo asiana levure chimique.
Azo asiana tamotamo na carry ihany koa.
beignets aux brèdes
beignets de cressons
Mazotoa omana ary ô!
mofo anana malagasy, mofo anana recette, mofo anana recipe, pate mofo anana, recette malgache mofo anana
Article précédent : Recette de carottes pimentées
Poulet surprise MalagasyArticle suivant :